Jose Mourinho ayaa shaqo ka helay kooxda Roma ee Talyaaniga xilli ciyaareedka soo socda… – Hagaag.com
Jose Mourinho ayaa shaqo ka helay kooxda Roma ee Talyaaniga xilli ciyaareedka soo socda…
Posted on 4 Maajo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Naadiga kubada cagta ee Talyaaniga, Roma, ayaa ku dhawaaqay maanta oo Talaada ah inay u magacowday Jose Mourinho tababaraha kooxdooda xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo la isku dayayo in kooxda laga ilaaliyo guul darrooyin, iyo in laga faa’ ideysto khibradii guulaha ee tababaraha ee uu ka gaaray Inter Milan 10 sano ka hor.
Go’aanka ayaa yimid kadib markii kooxda ay ku dhawaaqday horaantii maanta inay ku kala baxeen si heshiis ah tababarahooda Paolo Fonseca, oo sidoo kale reer Portugal ah dhamaadka xilli ciyaareedkan, ka dib markii uu ku guuldareystay inuu boos ugu helo kooxda tartamada Yurub xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo Roma ay ku jirto kaalinta toddobaad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga iyadoo leh 55 dhibcood, waxaa u dhaxeeya 9 dhibcood kooxda Lazio oo ku jirta kaalinta 6aad, iyadoo weliba hal kulan gacanta ku heysato.
Mourinho ayaa wuxuu gaaray guulo waaweyn markii uu tababaraha ka ahaa kooxda Inter 2008, isagoo kula guuleystay kooxda 5 koob labo sano gudahooda, sidoo kale waxay ku guuleysteen labo xili oo isku xigga horyaalka Talyaaniga 2008-2009 hadana 2009-2010, koobka Italia 2010 iyo Italian Super Cup 2008, marka lagu daro guushiisii ugu weyneyd markii kooxda ay ku guuleysatay Champions League 2010, ka hor inta aanu u huleelin kooxda Real Madrid.
“Waan ku faraxsanahay ku soo biirista Jose Mourinho qoyska naadiga Roma. Waa tababare weyn oo ku guuleystay koobab heerar kala duwan lahaa. Jose wuxuu nagu biirin doonaa khibradiisa aad u weyn iyo hogaaminta mashruuceena hamiga leh,” ayuu yiri Dan Friedkin, madaxweynaha naadiga Roma iyo kuxigeenka Ryan Friedkin.
Mourinho ayaa horay u soo tababaray kooxaha kala ah, Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid iyo Manchester United, waxaana bishii hore soo fasaxday kooxda reer London Tottenham Hotspur ka dib 17 bilood oo uu la joogay.
Mourinho ayaa yiri, “Kulankeygii aan la qaatay milkiileyaasha iyo Thiago Pinto (Maamulaha Guud ee Roma), waxaan isla markiiba fahmay baaxadda hamigooda ee kooxda, taasina waa himilooyinka iyo ujeeddooyinka marwalba i dhaqaajiya. Waxaan ka wada shaqeyn doonnaa sidii loo dhisi lahaa mashruuc guuleysta sanadaha soo socda. “
Farxadda iyo dhiirigelinta taageerayaasha Roma ayaa ah tan igu kaliftay inaan aqbalo howsha, waxaana doonayaa inaan bilaabo shaqo xilli ciyaareedka soo socda, ayuu raaciyey.
Dhanka kale kooxda Inter ayaa ku guuleysatay horyaalka Talyaaniga iyadoo weliba ay ka harsan tahay afar kulan, waxayna leedahay 82 dhibcood, iyadoo kooxda ugu soo dhow ee Atlanta ay leedahay 69 dhibcood.